Taona 2011 – Aogositra – Tsodrano
8/8 > Matio 22
and 14 : Fa maro no antsoina, nefa vitsy no fidina.
and 9/8 > Matio 22
and 21 Dia hoy Jesosy » Aloavy izay an’i Kaisara ary izay an’i Kaisara, ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra ».
10/8 > Matio 22
and 32 : Izaho no Andriamanitr’i Abrahama sy Andriamanitr’Isaka ary Andriamanitr’i Jakoba
(Eks 3: 6) . Andriamanitra tsy an’ny maty fa an’ny velona.
11/8> Matio 22
and 37 sy 38 Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra (Deot 6:5). Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev 19:18).
12/8 >Matio 23
and : 9 Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany no Rainareo dia izay any an-danitra.
and : 12 : Fa izay manandra-tena no haetry; ary izay manetry tena no hasandratra.
13/8 > Matio 23
Ireto andininy ireto : 13,15,16,23,,25,27,29 dia manomboka amin’ny hoe » fa lozanareo , mpanora-dalàna sy Fariseo ….’
(Ny mpanora-dalàna sy Fariseo handramo soloina anarana hafa ….)
14/8 > Matio 24 :13
Fa izay maharitra hatramin’ny farany no ho vonjena.
15/8 > Matio 24 : 23-24
Koa raha misy manao aminareo hoe: »Indro, aty Kristy, na: Indro ary; aza mino ianareo.
Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza hofitahiny.
16/8 > Matio 24 : 35
17/8 > Matio 25 : 13
Miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.
18/8 > Matio 25 : 23
Hoy ny tompony tamin’ilay nampitombo ny talentany : « Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin’ny kely ianao, dia ho tendreko ho mpanapaka ny be; midira amin’ny fifalian’ny tomponao.
19/8 > Matio 25 : 44
Hoy kosa ireo : « Tompoko, oviana no hitanay noana Ianao, na nangetaheta, na nivahiny, na tsy nanankitafy, na marary, na tao an-trano maizina, ka tsy mba nanompo Anao izahay »?
20/8 > Nomery 28 : 25
… Ary amin’ny andro fahafito dia hisy fivoriana masina ho anareo; aza manao tao-zavatra akory…
21/8 > Nomery 28 : 26 – 29 : 1- 11
Momba ny fanatitra
22/8 > Nomery 29 : 12 17 , 30 :1
Tohiny ny amin’ny fanatitra
23/8 > Nomery 30 : 2 – 17
Fanatanterahana voady sy fanafoanana azy
24/8 > Nomery 31 : 1-24
Adin’ny zanak’Israely sy ny Midianita
25/8 >Nomery 31 : 25 -54
Ny fizarana tao aorian’ny ady.
Inona no tianao omeko anao ?